संगठनले साधनालाई ध्वस्त पारिदिन्छ
बुढ्यौली साहित्यको प्रबर्द्धन तथा बिकासको लागि एक लाख सहयोग
‘जनप्रतिनिधि बागमती प्रदेश’ सार्वजनिक
किन तानिए बलिउड नायिकाहरु लागुऔषध सम्बन्धी अनुसन्धानमा
अर्पण थापा निर्देशित चलचित्र ‘तीन जन्तु’ को टिजर सार्वजनिक
‘गुरुदक्षिणा बाँकी छ दाई’
किरणको निर्देशन र राजन मुकारुङको शब्द तथा संगीतमा 'ज्यानै हाजिर भो' सार्वजनिक
हाम्रो होइन राम्रो नेतृत्व !
रंगमञ्चमा लाग्नुभएको कति भयो ?
म यो क्षेत्रमा लागेको त्यस्तै १९ देखि २० वर्ष भयो होला । मैले रंगमञ्च सुरु गर्नु अघि मलाई रंगमञ्च के हो भन्ने खासै थाहा थिएन । बिस्तारै मलाई थाहा भयो, यो सतही कुरा होइन । यसलाई बुझ्न अभ्यास, अध्ययन र निरन्तरताको आवश्यक छ । रंगमञ्च भनेको एउटा अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम रहेछ । त्यसपछि मलाई रंगमञ्च नै सहज लाग्न थाल्योे । यो संगै आफुलाई बुझ्न, जीवनलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन रंगकर्म मेरो कर्म बन्न थाल्यो ।
नाटकमा तपाईको सुरुवात कसरी भयो ? कहिले तपाई लाग्यो यही क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने ?
पहिला गाउँमा नाटक हेर्न पाइदैन्थ्यो । व्यवस्थित नाटकघरमा त धेरैपछि नाटक हेर्न पाएको । गाउँमा हाटबजारमा सडक नाटक हेर्न पाएको थिएँ । मुलत : गाउँमा टेलिभिजन र हिन्दी फिल्महरुको प्रभाव थियो । फिल्मकै प्रभावले कलाकार बन्ने चाहना थियो । खासमा हिरो बन्ने सपना थियो । तर नाटकमा लाग्छु भन्ने थिएन । नाटकका यति धेरै शैलीहरु, तरिकाहरु हुनेरहेछन् । यतिधेरै सम्भावना रहेछ । नाटकमा नै क्यारियर बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन ।
गाउँबाट उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएँ । कलेजमा एकजना साथीलाई मेरो रुचीको बारेमा थाहा थियो । राष्ट्रिय नाचघरमा एक वर्षे नाटक तालिम छ भन्ने उसले थाहा पाएछ । मलाई सुनायो । ५ रुपैयाँको टिकट टाँसेर फर्म भर्नु पर्ने रहेछ । ९० जना आवेदक मध्य अन्तर्वार्ताबाट १५ जनालाई छनौट गरियो । नाम ननिस्किएला कि भन्ने निक्कै डर थियो । तर १५ जनामा परियो । यो २०५६ सालको कुरा हो । त्यहाँ तालिम लिएका मध्ये कमलमणि नेपाल, भोलाराज सापकोटा, सुरेश चन्द जस्ता साथीहरु कलाकारिता मै छन् ।
त्यतिखेर यहाँ नियमित नाटक मञ्चन हुँदैन्थ्यो । तर नाचघरमा मैले केही नाटक भने हेरेको थिएँ । नाचघरमा पूर्णाकी नाटकहरु हुन्थे, चार दृश्य, पाँच दृश्य भएका । बीचबीचमा फिल्मको गीतहरुमा कलाकारहरुले नाच्थे । एउटा दृश्य सकिने वित्तिकै नाचगान हुन्थ्यो । सार्थक नाटकहरु हुन्थेनन् । हलुका मनोरञ्जनका नाटकहरु हुन्थे । सुनील पोखरेलसँग आरोहणबाट नाटक खेल्न थालेपछि आधुनिक नाटकको संगत हुन थाल्यो ।
म रंगमञ्चमै लाग्छु भन्ने ठ्याक्कै कहिले सोचेँ थाहा छैन । तर, सुनील पोखरेलसँग गुरुकुलको बसाई, शिल्पीको स्थापना र नाटक पढ्न २ वर्ष डेनमार्क गएपछि मेरो रंगकर्मको आधार झन् बलियो हुँदै गएको हो ।
त्यस्तो नाटकहरु हेरेर आएको व्यवस्थित खालको टिकट काटेर नाटक देखाउने समय रहेछ । सानै हुँदा जति नाटकमा प्रवेश गरे त्यतिबेला व्यवस्थित नाटकहरु हुँदैन थियो । २०५७ देखि मलाई पढाउने सुनिल पोखरेल नाचघरमा उनीहरुले पहिलो सानसेन केन्द्रसंग मिलेर गरेको आरोहण शनिवार भन्ने थियो । जुन उनीहरुले हरेक शनिवार नाटक गर्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला बिउताउने भएर एकेडेमीसंग सम्झौता गरेर वर्षको ६ वटा नाटक गर्ने योजनामा लाग्नु भएको थियो । यसै भित्र म पनि विद्यार्थी सिक्न चाहन्थे त्यही भएर म पनि उनीहरुसंग नै लागे ।
मेरो पहिलो नाटक कुमारी थियो । सुनिल पोखरेले निर्देशन गर्नुभएको र अशेष मल्लले लेख्नुभएको नाटकमा म सानो भुमिकामा देखिएको थिए । त्यसपछि धेरै सडक नाटकहरु पनि गरे । प्रभाकर शार्मको नयां क्रियसन सुनिल पोखरेलको निर्देशनमा नाटक गरे । जनचेतना जगाउन भनेर वैदेशिक रोजगार समेत एचआइभी एड्स सम्बन्धी काम गरे । पछि फाट्टफुट्ट नाटकहरु हुन्थे । नाचघरका विद्यार्थीहरु मिलेर नाटक गर्‍थ्यौं । व्यवस्थित रुपमा मैले नाटक देखेको अथवा खेल्न थालेको भनेको गुरुकुलको स्थापना २०५९ सालदेखि हो । तर जीविकोपार्जनका लागि २०५७ साल देखि नै पत्रकारितामा लेख्न थाले । नाटक बनाउन त्यति खेर हरेक दिन नाटक गरेर महिनौं दिन सम्म नाटक चलेर टिकटबाट पैसा उठाउने लिने भन्ने नै थिएन् । सोक अथवा वैकल्पिकमा नाटक गरेको थियो । गुरुकुल स्थापना भएपछि मैले नियमित रुपमा नाटकबाट नै आएको पैसाले जीवीकोपार्जन गर्न थाले । ५ वर्ष त्यहाँ काम गरे र शिल्पी स्थापना गरे । शिल्पीमा २ वर्ष काम गरेपछि फेरी म औपचारिक शिक्षा लिनका लागि नाटक पढ्नका लागि डेनमार्क गए । दुई वर्ष २०६६ देखि २०६८ सम्म बसेर २०६९ मा नेपाल फर्के पछि मैले शिल्पीको गोठाले नाटकघर स्थापना गरेर विगत ६ वर्ष देखि नै पुरै समय यसैमा व्यस्त छु ।
पढ्नका लागि डेनमार्क जानुभयोे, फेरी किन यहाँ फर्किनुभयो ?
रंगमञ्च सम्बन्धी केही तालिमहरु लिएपछि काम गर्ने साहस बढ्यो तर काम गर्दै जाँदा आफ्नो अज्ञानता महशुस हुँदै थियो । यही क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने यही विषयमा औपचारिक शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही भएर धेरै कलेजमा अप्लाई गरेको थिएँ । छात्रवृती पाएँ । जाँदा पनि फर्केर आउँछु र आफ्नै समूह स्थापना गरेर आफुले चाहेजस्तो नाटक गर्छु भन्ने थियो । पढाई सकेपछि मलाई डेनमार्क बसौं भन्ने नै लागेन । मेरोे एउटा राम्रो समूह, नाटकघर होस भन्ने चाहना थियो । व्यवस्थित रुपमा आफुले चाहेको नाटकहरु मञ्चन गर्न पाउँ भन्ने थियो । सम्पन्न देशहरु, शहरुहरुमा जाँदा मान्छेहरुले फलानो ठाउँमा थिएटर छ भन्छन् । त्यो शोभा हो आधुनिक समाजको । काठमाडौंमा नियमित नाटक होस् । मसँग यहाँका मानिसहरुलाई पनि नाटक देखाउन पाइयोस्, आफुले सिकेर आएको कुरा यहाँ देखाउन पाइयोस् भन्ने निक्कै ठुलो उत्कण्ठा थियो ।
नाटक गरेर के हुन्छ खासमा ? आम मानिसले किन नाटक हेर्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
नाटक हेर्नै पर्छ भन्ने छैन । कुनै साहित्यिक किताब नपढेपनि, फिल्म वा चित्रकला नहेरे पनि, संगीत नसुने पनि जिन्दगी चल्छ । तर जिन्दगी बँचाइ राख्न दौडधुप गर्नु भन्दा पर्तिर पनि अर्थ छ भने कलाले त्यो अर्थ खोज्न मद्दत गर्न ।
धेरै मानिसहरु सँग प्रश्न हुन्नन् । जो सँग प्रश्न हुन्छन् ती अरुबाट उत्तर अपेक्षा गर्नलागि हुन्छन् । नाटकले आँफैले आँफैलाई प्रश्न सोध्ने स्थितीमा पुर्याउछ । हरेक पटक थिएटरबाट निस्कँदा दर्शकहरुलाई यस्तो हुन्छ । खासमा प्राय कला साहित्यको शक्ति पनि यही हो जस्तो लाग्छ । यदि आफुले आफैलाई सोध्ने नयाँ नयाँ प्रश्नहरु जन्मिरहन्छन् भने जिन्दगी बाँच्नुको मजा छ ।
आफैँ कलाकार पनि व्यवस्थापक पनि भएर नाटकघर चलाउन कति सजिलो रहेछ ?
निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेछ । ठुलो रहरले जग्गा भाडामा लिएर नाटकघर बनाइयो । त्यो आफैँमा ठुलो खर्च थियो । तर, दैनिक खर्च, भाडा, समूहका सदस्य तथा कलाकारहरुको लागि तलब, नाटक उत्पादन खर्च मासिक रुपमा नाटकबाटै जुटाउनु निक्कै गाह्रो कुरा हो । त्यो बाहेक समूहलाई उत्कृष्ट नाटक उत्पादनका लागि तयार राख्नु, ताजा राख्नु सजिलो काम हैन । आफूले चाहेको विशेष शैली र शिल्पमा काम गर्न निश्चित चेतना र समर्पणका साथीहरु चाहिन्छ । हामी कहाँ सानो द्धन्द्ध वा सानासाना त्रुटिहरुले पनि ठुला अवरोधहरु खडा हुन्छन् । म आफै भित्रका गल्ती वा अज्ञानताले पनि चुनौति र अवरोध आएका छन् । तर, घटना र गल्तीहरुबाट सिक्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन ।
पुरानो रंगकर्मी कसको कामबाट तपाई धेरै प्रभावित हुनुहुन्छ ?
पुराना भन्नाले मैले काम नदेखेको रंगकर्मीहरुको कुरा गर्न मिलेन । मैले नाटक गर्न थालेदेखि स्पष्ट रुपमा तीन जनाबाट धेरै प्रभावित छु, सुनिल पोखरेल, अनुप बराल र वीरेन्द्र हमाल । खासमा भन्ने हो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कहीँ न कहीँ उहाँहरुको खवरदारी ममा भएको ठान्छु । सकारात्मक रुपमा खबरदारी भनेको । उहाँहरुको प्रेरणाले नै हाम्रो पुस्तालाई यहाँसम्म ल्याएको हो जस्तो लाग्छ ।
रंगकर्मीहरुको कुनै गुट वा संगठन छ ?
कोही कोही त्यसको अभ्यासमा छन् । कुनै पद वा स्वार्थका लागि उनीहरु त्यसो गरिरहेका छन् । मलाई कलाकारहरुको गुट वा संगठनप्रति कहिल्यै विश्वास भएन । कलाकारलाई आफ्नो विचार र सिर्जनाले शक्ति दिने हो, स्थापित गर्ने हो । गुट वा संगठनले हैन । त्यसका लागि साधना चाहिन्छ । गुट वा संगठनले साधनालाई ध्वस्त पारिदिन्छ । शक्तिको राजनीतितिर लोभ्याउँछ । जस्तो कि सबैभन्दा बलियो संगठन त वर्तमान सरकारसँग छ नि । तर त्यो संगठनले चेतना नदिने रहेछ । एकखाले विचारमा लय मिलाउँदा मिलाउँदै सिर्जनशीलता स्खलित हुने रहेछ । यो डर लाग्दो कुरा हो । किनभने एउटा संगठन बनाउनु भनेको कसै न कसैलाई बाहिर राख्नु हो । कलाकारितामा त्यसो हुनु हुँदैन । नचाहाँदा नचाहाँदै कलाकारलाई स्थायी संगठनले दुरुपयोग पनि गर्न थाल्छ । त्यसबाट कसरी बचेर आफ्नो काममा केन्द्रित हुने भन्ने चुनौती हो ।
हाम्रो कला, साहित्य निकै सिमित घेराभित्र छ भन्छन् नि । के यो साँचो हो ?
कला साहित्य कहिल्यै सिमित घेरामा बसेन । यसको स्वभाव नै फैलिने हो । संगीत र नृत्यको व्यापकता हेर्नुस् त नेपालको कुन कुनामा छैन । साहित्य अनेकौँ रुपमा जनजीवनमा संचारित छ । गाउँमा नाटक लिएर जाँदा सयौँ मानिसहरु उत्साहित भएर हेर्न आउँछन् । त्यसैले लोकप्रियताको हिसाबले यो देशमा कला र साहित्य सधैँ फैलिएको छ । तर व्यवसायिकता र सिर्जनात्मक आविष्कारको हिसावले सायद हामी संकटमा छौँ । यो संकटको दोषी केही प्रतिशत हामी आफैँ हौँ र केही प्रतिशत यो देशको स्थिति । शिक्षा, व्यापार र अर्थतन्त्रकोे स्थिति । हाम्रो शिक्षाले साहित्य पढ, नाटक हेर, बौद्धिक अन्तक्रिया गर भन्छ ? स्तरीय चलचित्र वा संगीतको छनौटको चेतना दिन्छ ? हाम्रो व्यापार वा अर्थतन्त्रले त्यो सुविधा दिन्छ ? हाम्रो राजनीतिले कला साहित्य बुझ्छ ? सानु कुरा हो तर एउटा उदाहरणः हाम्रा सार्वजनिक यातायात र बाटोघाटोले पनि नाटक हेर्न नजा भन्छ । कति गाउँहरुमा म नाटकको प्रशिक्षणमा जाँदा अझै कहिल्यै फिल्म नहेरेका युवाहरु पनि भेट्छु, नाटक त परको कुरा । हाम्रो सामाजिक संरचनामा कला साहित्य आधुनिक जीवन शैली र शिक्षाको अंश हो भन्ने बनाउन अझै निकै वर्ष लाग्ला ।
विश्व बजारमा पनि हाम्रो कला साहित्य परिचित हुन नसकेको हो ?
विश्व बजार भन्ने कुरा एकदमै अमुर्त कुरा हो । कतिलाई विश्व बजार भन्ने ? संसारभरी नै पुग्नु त धेरै ठुलो कुरा भयो । तर, अन्तराष्ट्रिय महोत्सव वा मेलाहरुमा हाम्रा नाटक, फिल्म, चित्रकला वा संगीत देखाउन लायक बनेका छन् । अन्तराष्ट्रिय महोत्सवहरुमा हाम्रा कलाकारहरुको सम्मानित उपस्थिति भइरहेको छ । त्यस हिसाबले हामी त्यति पछाडि छैनौँ । साहित्यमा स्तरीय अनुवाद र विदेशी बजारमा पुर्‍याउने माध्यमको खाँचो छ । स्तरीय कृतिहरु हामी कहाँ छन् ।
रंगमञ्चलाई सरकारले त्यति चासो नदिएकोे हो ?
सरकारको मौनता चरम उत्कर्षमा छ । धेरै स्कुलहरुमा पढ्नका लागि डेक्सब्रेन्च छैनन्, शिक्षकहरु छैन् । सुत्केरी महिलाहरुको सही उपचार हुन नसकेर मृत्यु भइरहेको छ । किसानकोमा मल र बिउ समयमा पुग्दैन । बिउ पुग्छ तर उम्रिँदैन । उम्रिए फल लाग्दैन । यति हेलचेक्र्याईँ छ जिम्मेवारी लिएकाहरुमा । नेपालभरी नै सार्वजनिक यातायातको स्थिति हेर्नुस् त । कस्तो दुरावस्था छ । कुन क्षेत्रमा सरकारले चासो दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कलाकारहरुले के आशा गर्नु ?
राज्यमा बसेको मान्छेहरुमा साँस्कृतिक चेत हुनु पर्यो । त्यसपछि राज्यले साँस्कृतिक निति बनाउनु पर्‍यो । आजको यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक, धर्म निरपेक्ष र समाबेसी भनिएको मुलुकको राष्ट्र् गीत किन एउटा भाषामा मात्रै छ ? राज्यले भाषा, संस्कृति, कलालाई कसरी हेर्छ भन्ने एउटा नमुना हो । यो चानचुने कुरा छैन । ५० औँ भाषामा राष्ट्र् गीत अनुवाद गरेर बनाउँदा त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ । त्यसो हुनु भनेको धेरै क्षेत्रहरुमा सासन गर्नेहरुको फराकिलो दृष्टिकोण फराकिलो हुँदै जाने अभ्यास हो । नीजि स्कुल हुने कि नहुने ? तिनले लिने शुल्कको सिमा कति ? सरकारी स्कुलको आधारभूत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कृषिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उद्योगको कसरी व्यवस्थापन गर्ने अरु धेरैमा राज्यको नीति छैन् । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु, नीजि विद्यालयहरुले कस्ता कस्ता नयाँ किताब पाठ्यक्रममा घुसाएका छन् शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्तो हुँदैन ।
गुरुकुल बन्द भयो । भाडाको जग्गामा भएका नाटकघरहरु सधैँ बन्द हुने त्रासमा छन् ? यस्तो अवस्थामा कि शिल्पीले नाटकघर खोलेको त ?
गुरुकुल स्थापना हुनु भन्दा अगाडि कुनै रंगकर्मीहरुले व्यक्तिगत रुपमा नाटकघर बनाएर नाटक गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्ने स्थिति थिएन । गुरुकुलले त्यो साहस दियो । तर, जोखिमपुर्ण काम चाहिँ हो । धेरै देशहरुमा राज्यले नै बनाइदिएको नाटकघर रंगकर्मीहरुलाई उपलब्ध छन् । तर हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । धेरै साथीहरुले निक्कै दुःख गरेर नाटकघर बनाउनु भएको छ । उहाँहरुको इच्छाले गर्दा हो । त्यही भएर इच्छाशक्तिले मान्छेलाई सञ्चालित गर्ने हो । जस्तै विषम परिस्थितिमा पनि हामी रंगकर्म गरिरहेका हुन्छौँ । एकदिन जिन्दगी त रहँदैन भने भाडामा लिएको हल बन्द भए होस् । सकुन्जेल गर्ने हो भन्ने अलिअलि अर्ध मूख्र्याईँसँगै काम गरिरहेका छौ।
तपाईको नाटकघरबाट नयाँ नयाँ कलाकारहरु देखिन्छन् । नयाँ आउने पुरानो बाहिरिनुको कारण के हो ?
हरेक नाटकघरहरुले कसैलाई सरकारी जागिरे जस्तो बाँधेर राख्ने हैन । यो त अभ्यास गर्ने आफ्नो सम्भावना खोज्ने ठाउँ हो । हिजो म पनि अर्कै संस्थामा थिएँ । आज शिल्पीमा छु । भोली म आफैँ नरहन सक्छु । कलाकारिता क्षेत्र नै यस्तै हो । सादय तपाईँहरुले गर्ने पत्रकारिता पनि त्यस्तै होला । एउटै प्रकाशन गृहमा कतिजना मानिस सधैँ बसिरहन्छन् ? यहाँ नाट्य प्रशिक्षण पनि हुन्छ,सिक्छन्,जान्छन् । वाहिर सम्भावना खोज्छन् । प्रतिभा, धैर्यता र सोच हुनेहरु निरन्तर काम गरिरहेका छन् । विचलित हुनेहरु अरु क्षेत्रमा सम्भावना खोजिरहेका छन् ।
नाटकमै लागेर जिन्दगी धान्न सकिन्छ त ?
गाह्रो छ । तर, धेरै काम र थोरै उपभोग गर्ने हो भने सम्भव छ ।
अहिले रंगकर्मीमा नाटक निर्देशन गर्ने होडबाजी चलेको छ, के हो यो ?
अलिक अनुभव लिएर, बुझेर निर्देशन गरेको राम्रो । निर्देशन निक्कै महत्वपुर्ण काम हो । तर सधैँभरी नयाँ निर्देशकको काम उत्कृष्ट हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन । एउटा उद्योग भित्र स्तरीय र कमसल दुईवटै कामहरु भइरहेको हुन्छ । उत्कृष्ट कामहरु पनि भइरहेको हुन्छ, झुर काम पनि भइरहेको हुन्छ । कलामा कहिलेदेखि कसले के काम गर्ने भन्ने सिमा तोक्नु गलत हो । नयाँले सिक्दै गएर पछि राम्रो काम गर्ने हो नि । आज जसले राम्रो गरिरहेका छन् हिजो उनीहरुको सुरुवाती दिन अज्ञानता र सिकाई बीचबाटै आएको हो ।
प्रस्तुति : सुकृत नेपाल